Teo ambany tafo manify amin'ny vokatra reptile China Manufacturer
Description:Teo ambanin'ny tanka tezitra mba hihazonana hafanana,Heating Pad miaraka UL,Heating Mat sy Infrared
Home > Products > Reptile Heat Pad > Under Tank Pad > Teo ambany tafo manify amin&#39;ny vokatra reptile
Teo ambany tafo manify amin'ny vokatra reptile
Model No.: F035D
Reptile Under Under Heating Tank
Tena ilaina amin'ny fampiasana amin'ny biby an-tsokosoko, biby amphibie, biby madinika na tarazo.
Miantehitra amin'ny tsiranoka matevina eo an-tampon'ny tranonao mba hahazoana hafanana tsara indrindra
Ny AIICIOO UTH mpitsabo dia manomboka amin'ny 4 ka hatramin'ny 24 watts ka mahatonga azy ireo ho ara-toekarena be miasa
Azo ampiasaina amin'ny thermostat ary / na miaraka amin'ny loharanom-pahasalamana fanampiny ho an'ny karazam-bary avo lenta
Fivoarana eo amin'ny bokotra na ny faritry ny terrarium
Ny fitaovana fanamafisam-peo vaovao dia iray amin'ireo fitaovana tena mahomby sy azo antoka ho an'ny fahasalamana ho an'ny reptile sy ny amphibia. Ny raibeny sy ny amphibians dia mangatsiaka ary ao amin'ny toeram-ponenany voajanahary matetika no ampiasain'ny masoandro amin'ny hafanana. Ny Reptilia dia fitaovana fampiasan'ny terrarium izay mampivelatra ireo habaka manjelatra ny masoandro. Izy ireo dia tsara kokoa ny loharanom-pahasalamana 24 ora ho an'ny karazana biby an-tapitrisany sy amphibiana ary ilaina indrindra ho loharano hafanana mandritra ny alina ho an'ny karazam-borona maro. Our reptile Ny fandraketana hafanana hafahafa dia mety hifikitra tanteraka amin'ny terrarium, mamorona fatorana matanjaka ho an'ny famindrana hafanana tsara.Durable.flexible.waterproof. Ny fananganana anti-kovety sy ny fanamafisana ny harena dia mitarika ho amin'ny fiainana serivisy lava. Tena azo antoka tanteraka. Ny serivisy OEM dia misy. Ny vokatra antsika dia natao ihany koa mba hifanaraka amin'ny fenitra CE, RoHS, Ul, ETL.
Teo ambanin'ny tanka tezitra mba hihazonana hafanana Heating Pad miaraka UL Heating Mat sy Infrared UTH eo ambanin'ny fanamainana tank Mitandrema amin'ny hafanana hafanana Toeram-pandehan'ny hafanana hafanana mora Toeram-pandehan'ny fiakaran'ny hafanana hafanana Toeram-panafana famonoana hafanana